Milling - Delta Ubunjiniyela beBelgium
Faka kungobo yomlando kusuka kusigaba "Ukugedla"
ULwesithathu, 12 Mashi 2014 by Ubunjiniyela beDelta
Iyunithi elilodwa lokulungisa intamo
Le yunithi yokulungisa intamo enekhanda eli-1 inyusa intamo yamabhodlela angaphezulu. Iqinisekisa intambo eyisicaba, enhle ngaphandle kokulandela imichilo. Intamo ihlala isesimweni esinqunyelwe. Ukulawulwa ngokugcwele kwe-servo
Ishicilelwe ku milling
Umakwe ngaphansi: i-servo elawulwayo, ukuncipha kwentamo, amabhodlela angqimba amaningi, ukulinganisa, umgoqo ovuzayo, ukunciphisa, ukusika intamo yamabhodlela, kabusha ungqimba oluphezulu, intamo eyisicaba, akukho okulandelanayo, isikhuni sedome elahlekile, ukonga isisindo, Amakhanda we-2, amawele amakhanda, Amakhanda ama-2 anciphisa amakhanda, isikhundla esimisiwe, ikhwalithi ezinzile, ukugaya intamo, isigayo, DC300
NgoLwesine, 26 Mashi 2020 by UCristina Maria Sunea
Iyunithi yokulungisa intamo ekhanda
Le yunithi yokulungisa intamo enamakhanda ama-2 idambisa izintamo zamabhodlela angaphezulu. Iqinisekisa intambo eyisicaba, enhle ngaphandle kokulandela imichilo. Intamo ihlala isesimweni esinqunyelwe. Ukulawulwa ngokugcwele kwe-servo
Umakwe ngaphansi: i-servo elawulwayo, ukuncipha kwentamo, amabhodlela angqimba amaningi, ukulinganisa, umgoqo ovuzayo, ukunciphisa, ukusika intamo yamabhodlela, kabusha ungqimba oluphezulu, intamo eyisicaba, akukho okulandelanayo, isikhuni sedome elahlekile, ukonga isisindo, Amakhanda we-2, amawele amakhanda, Amakhanda ama-2 anciphisa amakhanda, isikhundla esimisiwe, ikhwalithi ezinzile, DC302, ukugaya intamo, isigayo